LEELLOO BAGA NAGAAN NUU DHUFTE! – YEROOBLOG
LEELLOO BAGA NAGAAN NUU DHUFTE!
Yerooblog	News & Views	 November 16, 2015 December 25, 2015 2 Minutes
Leelloo baga nagaan dhufte! Akka hedduun keenya giddu kana dhageenyetti, Leelloon maqaa gaazeexaa dhuunfaa Afaan Oromootiin maxxanffamtee Jimaata darberraa kaasee gabaarraa ooleeti. Maqaaa baay’ee miidhagaa fi baayye’ee nama hawwatu dha.
Waggoota hedduudhaaf gaazeexaa fi barruu dhuunfaa Afaan Oromootiin akka gabaarra oolu hawwaa turre. Kun amma hawwiin keenya kara Leelloo dhugoomee jira. Dhugaadha, kufaattii Dargiin booda Gaazeexaa fi barruullee hedduun Afaan Oromootiin barreefamanii gabaarra oolaa turan. Fakkeenyaaf, Urjii (gaazeexaa), Gadaafi Odaa(barruulee) kaasuun ni danda’ama.Garuu, gaazeexaa fi barruulleen kunneen umurii dheerachuu hindandeenye. Sababni isaas kannneen guddina Afaan Oromoo jibban gaazeexota fi barruullee sagalee Oromoo ta’anii turan akka cufaman taasisan. Sana booda gaazeexoota fi barruullee uummata Oromoof sagalee ta’an arguun hindanda’amne.
Akkuma beekamu, gaazeexoonni fi barruulleen Afaan Oromootiin maxxanfaman ni jiru; garuu kunneen holola mootummaa biyya bulchaa jiruu kan dhiyyeesanni dha. Gaazeexoonni/barruuleen kunneen uummata Oromoo biratti fudhatama tokkoollee hinqaban. Mootummaan torbe torbeen maxxansee birroollee isaatiif tolaan raabsa. Oromoonni gaafa gaazeexoota ykn barruullee kunneen argan, ashaboo fi barbarree ittiin marachuuf itti fayyadamu. Faayidaan isaaniis kana bira kan darbu miti.
Yeroo adda addaatti gaazexoota fi barruu Afaan Oromoo dhuffaatiin maxxanfaman gabaarra oolchuuf carraaqqiin taasifamaa tureera. Garuu, mootummaan biyya bulchu, gaazexoonni Afaan Oromootiin sadarkaa dhuunfaatti akka maxxanfaman yoo eeyyame rakkina natti fiduu jedhe waan sodaatuuf yeroo adda addaatti eeyyama namoota gaazeexaa dhuunfaa banuuf gaafataniif hinlaatu ture. Yoo laates, maxxansa lama ykn sadii booda, namoota gaazexoota kana maxxansan qabee mana hiidhaatti naqa. Kanarraan kan ka’e, gaazeexaa ykn barruu Afaan Oromootiin maxxanfamu arguun baay’ee rakkisaa ture. Kana malees, nuti Oromoonni hamma deemu qabnu dhiibnee gara fuulduraatti deemuu hindandeenye ture.
Amma garu, haalli kun jijjiiramuuf kan deemu fakkaata.Gabaarra ooluun Leelloo kana kan agarsiisudha. Akka ani amanutti Leelloon salphaatti sadarkaa kanarra hingeenye. Leelloo asiin ga’uuf qabsoon guddaan akka godhame beekuun nama hinrakkisu. Rakkina hedduu keessa darbame sadarkaa kanarra ga’amuun isaa Oromoota baay’ee gammachiiseera. Anis akka Oromoo tokkootti baay’ee gammadeera. Ammas Leelloo rakkina karaa siyaasaa fi diingadee uummata Oromoo irra ga’aa jiru ifatti baasuu fi mootummaa amma aangoora jiruu wajjin wala’ansoo walqabuun salphaa kan ta’u natti hin fakkaatu. Mootummaan kun Leelloo kaayyoo dhaabbateefii galmaan akka hingeenye ammaa jalqabee dura dhaabbachuu akka jalqabu gaaffii hinqabu. Haata’u malee, qopheessitoonni Leelloo fi uummanni Oromoo kutannoodhaan yoo hojjetan, Leelloon gara fuuldurratti Leelloowwan hedduu ta’u akka dandeessu nan amana.
Dhumarratti, namoonni Leelloo dhugoomsuuf aarsaa kafaltan hundaaf kabajaa fi jaalala guddaa isiniif qaba. Hojiin keessan uummata Oromoo kan boonsudha. Jabaadhaa, nutis isin wajjin jira. Waaqni Oromoo isin haagargaaru; hojiin keessan ifee haamula’tu; kan isin goomatu isinirraa haaqabu! Leelloonis sagalee uummata Oromoo taatee akka aduutti haa mula’attu!
Published November 16, 2015 December 25, 2015
Previous Post STOP DENIALS; SAVE THE LIVES OF MILLIONS!
Next Post Beela Uummata Fixaa Jiru Dhoksuu Yaaluun Yakka Guddaadha
One thought on “LEELLOO BAGA NAGAAN NUU DHUFTE!”
Gidissa Elfeta says:
Eyee! baayi’ee nama gammachiisa, daandiin itti ija Oromoo Saaquu danda’amuufii jidugaleessummaa Afaan Oromoo Odeeffannoo tamsaasuudhaan kan ittiin eegsisuu danda’amus kana waan ta’eef Saba Oromoo Odeeffanoon tokko gochaa jabaadha jechaa rakinaaf gadadoo sabni Oromoo irra jiru dhugaa Onnee irraa maddeen Leelloodhaan himaa hima dabarsaa Waaqayyo burqaan dhugaa sin duukaa haata’u